Inhlangano esiza amantombazane kwezamabhizinisi | IOL Isolezwe
Inhlangano esiza amantombazane kwezamabhizinisi
Isolezwe / 28 June 2012, 12:53pm /
KUZOKWEHLISA ubunzima emantombazaneni afuna ukungena kwezamabhizinisi ukusungulwa kwenhlangano esiza lawo afisa ukuqala ibhizinisi.
UNksz Ntokozo Zikalala wenhlangano esanda kusungulwa ebhekele ukuthuthukisa izingane zamantombazane ezinesifiso sokungena kwezamabhizinisi, iYoung Girls' Network (Ygn), uthe bafuna ukuveza amathuba izingane zamantombazane ebezingeke ziwathole ngenxa yezindawo ezivela kuzo nangenxa yokungalutholi ulwazi.
UNksz Zikalala uthe kusukela beqale ukusebenza kulo nyaka sebevulele amantombazane amathuba okuthi azithuthukise.
“Kunamantombazane asafunda isikole asekwaze ukuya phesheya eyocijwa ngamakhono ahlukahlukene kwezamabhizinisi,” kusho uNksz Zikalala.
Awagcinanga ngokufunda kepha nabo bakwaze ukudlulisa ulwazi abanalo ngezindlela ezahlukene okongiwa ngazo imali kuleli nokunye. Lokhu sekuwabeke ethubeni lokuthi aqhubekele phambili aqale ezawo izinhlelo zokuzithuthukisa njengoba kukhona nasebeqale amabhizinisi amancane.
Ngempelasonto edlule le nhlangano ihlanganise amantombazane alingeniselwa ku-250 eMlazi asuka ezindaweni ezahluklene ngenhloso yokuthi akhulume ngokuqala amabhizinisi, ukuphatha imali nezinye izingqinamba abhekene nazo. Kulo mcimbi bekuhlangene amantombazane afundayo nasefuna imisebenzi nasekukudala ezama ukuthola amathuba okuqala ibhizinisi ngenhloso yokuba nenkulumo mpikiswano ngokuthi ngubani obhekele intuthuko yabo.
UNksz Zikalala uthe bakubone kubalulekile ukuthi bangabheki kuphela abantu abasha abafundayo kepha bagxile nakulabo abangasebenzi osekunesikhathi eside behleli emakhaya ngenxa yezingqinamba ezahlukene.
Uthe ukuba khona kwenhlangano efana ne-Ygn kuzokwenza kube lula ukuthi intsha ifunde okuningi ingakafinyeleli ekufuneni imisebenzi.
Uthe okumenze wabona isidingo senhlangano efana nale ukubona izingane eziningi eziphila ngesibonelelo sikahulumeni. Lokhu ukubone ngesikhathi esebenza kumnyango obhekele ukufeza izidingo zomphakathi ebhange, iThala.
“Ngeke sikwazi ukuphila kanje lapho iningi lezingane zondliwa ngesibonelelo sikahulumeni. Indlela yokugwema lokhu wukuqikelela ukuthi intsha ekhula manje ifundiswe ngokubeka imali futhi ikhuthazwe emaphushweni ayo,” kusho uNksz Zikalala.
Uthe ukukhulelwa kwezingane zamantombazane zisencane nakho kungenye yezinselelo okufanele kulwiswane nayo.
Konke lokhu ukubona kuyizinto le nhlangano ezokwazi ukubhekana nazo.
Uveze ukuthi izinkulumo mpikiswano ezifana nalena ababenayo eMlazi zisazoqhubeka ziye nakwezinye izindawo.
Uthe lapho abavakashela khona bavula igatsha lale nhlangano ukuze kube nentsha ezosizana nezingane ezihlala kuleyo ndawo ukuze umsebenzi wokutakula izingane zamantombazane uqhubeke noma sebedlulele kwenye indawo. Wonke la mantombazane aba yingxenye yenhlangano.
Uthe bayazi ukuthi akusibo bonke abazofuna ukuba ngosomabhizinisi yingakho abasizwa kukho kungagcini ebhizinisini kuphela kepha kuba ngempilo yonkana.